Privet group — Teletype
Waxaa laga yaaba in aad is waydiinaysid sidee ayaan ugali karaa privet group ka shirkada.
Suaashan ayaa waxaa na waydiiyay dad badan jawaabtedana qoraalkan ayaan ku sheegi doono haddu eebe idmo.
Marka ugu horaysa waxaan ku fahansiin doona sida aan u soo gudbino signals ka.
5 maalimod isbuuci 5 saacadod maalinki waxaan soo gudbina signals awoododu gaarsiisantahay 90-95% waxaana signals kan ku soo dirnaa group ka privet ka ah ee shirkada.
Sidee ayaad u gali kartaa group ka privet ka ah ??!
Sida aad u gali kartid aad iyo aad ayay u fududahay marka ugu horaysa waxaad iska diiwangalinaysa linki'ga aan kuu soo dirayno ka bacdi waxaad ku shubanaysa account kaaga 20$ oo kaliya, screenshot ayaad ka soo qaaday ID gaaguna waa in uu ka muuqda sawirka.
Markaan ku shubta oo aan sawirka soo diro maxaan sameeya ??!
Markaad iska diiwan galisid linki'ga aan ku soo dirayno ka bacdi aad 20$ ku shubatid screenshot'na aad ka soo qaadid waxaan si dhakhso ah oo aan 24 saacadod ka badneen kuu gu soo darayna group ka Privet ka ah ee shirkada.
Maxaan ka faaidaya group ka Privet ka ah ??
Waxaad group ka Privet ka ah ka faaidaysa inaad heshid signals awood badan maalin walba 5-15 signal, iyo inaan ku barno strategy xoog badan, inaan ku siino duruus kala duwan sida xiliga ugu fiican ee aad galaysid suuqa iyo WM, Inaan si bilaash ah kuu siino buugaag aad wax badan ka faaidaysid kaana dhigaysa qof xariif ku ah suuqa forex ka.
October 7, 2020, 13:24